विविध Archives - Page 8 of 21 - Saptakoshionline
कोही त्यो ठूलो रूखतिर हँस्याङ–फस्याङ गर्दै गइरहेको देख्छु । हातमा डोरी पनि छ । यो मान्छे हाम्रो ठाउँको होइन । यो पनि बुझेको छु । डोरी किन बोक्यो ? म जवाफ सोच्ने प्रयास गर्छु । यो मान्छे पक्कै मर्न हिँड्यो । जवाफ मलाई आयो । छेउछाउ कोही छैनन । मानवताको नाताले मैले उसलाई बचाउनुपर्छ । स्वतन्त्रताको नाताले मैले उसलाई मर्न दिनुपर्छ । मान्छे मर्न पाउनुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो । म उसलाई बचाउन चाहान्न । मै...
पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा ? यस विषयमा प्राचीन समयदेखि नै बहस सुरु भएको थियाे, तर पनि यसमा कसैको एकमत भने थिएन ।सदियौँदेखि यस सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको दिमाग घुमाइरहेको थियो । अब तपाईं भन्नुस् कि यी दुईमध्ये कुन पहिला आयो ? तपाईं अन्डा पहिला आयो भन्नुहोला, तर सवाल यो आउँछ कि अन्डा कसले दियो त ? कुखुरा नै थिएन भने अन्डा कहाँबाट आयो ? यदि कुखुरा पहिला आएको भए अन्डाविना कसरी जन्...
कहिलेकाही मरेको मान्छेहरू सपनामा देख्छौ । प्राय मानिसले बेला बेला मरेका मान्छेलाई सपनामा देख्छन् । सपनामा मरेको मान्छेहरू किन आउछन् ? यो विषय सबैका लागि अनौठो रहस्यमय हुने गर्छ । मनोवैज्ञानिकका अनुसार सपनाहरूमा विशेष सन्देशहरू लुकेका हुन्छन् । सपनामा लुकेका सन्देश बुझ्दा मान्छेले जीवन परिवर्तन समेत गर्न सक्छन् । सपनामा आउने मरेको व्यक्तिले कहिलेपनि आफ्नो कुरा शब्दमा व्यक्त गर्दैनन् । उनीहरू इश...
नेपाली फिल्मकी चर्चीत अभिनेत्री हुन् आञ्चल शर्मा । उनको जन्म सन् १९९८, मार्च १९ मा भएको हो । उनको रियल नाम भने आञ्चल दवाडी हो । उनी मोडल, अभिनेत्री, भिजे हुन् । उनको माता पिताको नाम उत्तम दवाडी र मिरा दवाडी हो । उनले आफ्नो स्कुले शिक्षा काठमाडौँ इन्टरनेशल स्कुलबाट लिइन् । उनलाई क्वाटी, किमा, सेकुवा जस्ता खानेकुराहरु खान मनपर्छ । उदिपसँगको प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक खुलाएकी उनले विवाहको तयारी गर...
‘स्तन’को तल्लो भागमा ट्याटु खोपेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अभिनेत्री साम्राज्ञलक्ष्मी शाह केही समय विवादमा तानिएकी थिइन् । उनको उक्त तस्बिर ट्याटु कलाकारले सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै केही समय सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित पनि भइन् । प्रेमलगायतका विभिन्न विवादमा तानिने साम्राज्ञीको सार्वजनिक भएको त्यो तस्बिरले अधिक चर्चा पाएको थियो । नेपाली फिल्ममा अंग प्रदर्शनको क्रम जति चर्को छ त्यति नै त्यस्ता अंगमा...
अधिकाशं केटाहरुको गुनासो गर्छन् कि उनीहरुका गर्लफ्रेण्ड सानासाना कुरामा रिसाउने गर्दछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ, यसरी गर्लफ्रेण्ड रिसाउनुमा कतिपय तपाई आफ्नै कारण रहने गर्दछ । जुन कुरालाई केटाले साधारण वा मामुली बुझेका हुन्छन् त्यहि बिषय तपाईको गर्लफ्रेण्डका लागी गम्भिर र महत्वपुर्ण पनि हुनसक्छ । त्यसैले यदि तपाई आफ्नो गर्लफ्रेण्डलाई खुसी राख्न चाहानुहुन्छ भने भुलेर पनि यी ६ काम नगर्नुहोस् । १...
एक जना चर्चित पाकिस्तानी गायिका रावी पिडजाराको नग्न तस्बिर र भिडियो लिक भएको छ । सेक्स टोय खेलाएको उक्त भिडियो अहिले युट्युवमा प्रशस्त मात्रामा हेरिन थालिएको छ । उनी आफैंले बनाएको उक्त भिडियो खुसीका लागि बनाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । यो भिडियो बनाएको मोबाइल उनले बेचेकी थिइन् । रिकभर गरी भिडियोलाई इन्टरनेटमा हालिएको जनाइएको छ । कतिपयले भने उनका प्रेमीले उक्त भिडियो लिक गराएको उल्लेख ग...
किन हुन्छ मिर्गौला फेल ? लक्षण र बच्ने उपाय यस्ता छन्
१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आत्मबल बलियो देखिन्छ। आफू स्वस्थ भएको छनक दिँदै उनी बालुवाटार बसेर सक्रिय जीवन बिताइरहेका छन्। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा दुई पटक हेमोडायलासिस गरेपछि डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। दुवै मिर्गौला फेल भएपछि हेमोडायलासिस वा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। मिर्गौला बि...
ऋचाको ब्याचलर पार्टी
अभिनेत्री ऋचा शर्माले ब्याचलर पार्टी दिएकी छन् । उनले केही आफ्ना नजिकका साथी जमघट गराएर ब्याचलर पार्टी दिएकी हुन् । पोखरामा दिएको पार्टीमा अभिनेत्रीद्वय प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, फेसन डिजाइनर सिवांगी प्रधानलगायतको सहभागीता रहेको थियो । ‘भिसा गर्ल’, ‘आधा लभ’, ‘सुनकेसरी’ लगायत थुप्रै फिल्मकी अभिनेत्री ऋचाले आगामी मंसिरमा लगनगाँठो कस्ने भएकी छन् । लामो समयदेखि दिपेक्ष्य राणाको प्रेममा रहेकी...
काग तिहार, किन पुज्ने गरिन्छ काग ?
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज यमराजको दूतका रुपमा कागलाई मीठो मीठो चीजविज खान दिएर मनाइँदैछ । कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन सुरु हुने यमपञ्चक भने यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण शुक्रबार बेलुकीदेखि नै शुरु भएको छ । शुक्रबार बेलुकी त्रयोदशी तिथि लाग्ने भएकाले यमपञ्चक शुरु गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यसैगरी लक्ष्मीस्थिर राख्नका लागि गरगहना ...